Dhalinyarada & Dagaallada - Ka Qaybgalka Siyaasadda
Siyaasaddaa ayaa ah qodobka muddadii tobanaaanka sano ahayd ee la soo dhaafay saamaynta ugu weyn ku lahaa nolosha Soomaalida. Haddii ay dhalinyarada doonayaan in isbeddel dhacaan waa lagama maarmaan in dhalinyaradu siyaadda ka qaybqaataan.
Barnaamijkeenna Dhalinyarada Maanta iyo Dagaallada Soomaaliya waxaan ku soo qaadanaynaa siyaadda iyo doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan.
Siyaasaddaa waxay in ka badan nus qarni soo ahayd qodobka ugu muhiimsan ee saamaynta ugu weyn ku lahaa nolosha Soomaalida. Haddii ay dhalinyarada doonayaan in isbeddel dhacana waa lagama maarmaan in dhalinyaradu siyaadda ka qaybqaataan.
Dhalinayarada iyo ka qaybqaadashada siyaasadda ayaa ah modwduuca barnaamijkeenna Dhalinyarada Maanta iyo Dagaallada ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Maxamed Sulaymaan Cumar oo 22 jir ah, yaraantiisiina ku biiray siyaasadda. Isagoo jooga Hargaysa ayuu iiga warramay sida uu ugu biiray siyaasadda.
Dhalinyarada & Siyaasadda